Mpikatroka Afrikàna Tatsimo mafàna fo no nahazo ny loka 2021 Per Anger Prize · Global Voices teny Malagasy
Sibusiso Innocent Zikode dia mpiaro ireo olona tsy manana hialaofana
Voadika ny 30 Jona 2021 20:54 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Esperanto , English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2021)
S'bu Zikode, mpiara-manorina ny hetsika Abahlali baseMjondolo niresaka tao amin'ny Poverty Scholar Program: Poverty Initiative Strategic Dialogue, 13 Novambra 2010. Sary avy amin'i Michael Premo, (CC BY-NC-SA 2.0).
Ilay Afrikanina Tatsimo mpikatroka ho an'ny zon'olombelona Sibusiso (S'bu) Innocent Zikode no nahazo ny loka 2021 Per Anger Prize . Ny asan'i Zikode dia miompana amin'ny zo hanana trano, ny tany ary ny fahavelomany ho an'ireo mponina sahirana indrindra any amin'ireo trano bongo ao amin'ny firenena, ary izy no hahazo ny loka fanampiana noho ny maha-olona avy amin'ny ny The Living History Forum amin'ny 21 Aprily.
Natsangan'ny governemanta soedoà tamin'ny 2004 ary tantanan'ny The Living History Forum, ity loka ity dia mampiroborobo ny fandraisana andraikitra manohana ny zon'olombelona sy ny demokrasia manerana izao tontolo izao. Ny loka dia nomena ny anaran'i Per Anger, diplomaty soedoà any Budapest izay namonjy Jiosy maro tamin'ny fanenjehana sy ny fahafatesana nandritra ny Ady Lehibe Faharoa tao Hongria nobodoin'ny Nazi.
Zidoke no mpiara-manorina, 16 taona lasa izay, ny Abahlali baseMjondolo (fehezanteny azo adika tsotsotra hoe “ny olon'ireo trano bongo”), hetsika afrikanina tatsimo iray miasa manohitra ny “fandroahana tsy ara-dalàna sy manao fanentanana ho an'ny zo hananan'ny rehetra trano hipetrahana ”, indrindra ho an'ireo mipetraka amin'ny trano bongo. Ny hetsika dia teraka avy tamin'ny fihetsiketsehana nokarakarain'ireo mponina tsy ara-dalàna tao amin'ny lalana Kennedy Road tao amin'ny tanàna atsinanan'i Durban tamin'ny fiandohan'ny taona 2005 ary niitatra hatrany Pietermaritzburg sy Cape Town .
Manana olana amin'ny trano fonenana mampidi-doza i Afrika atsimo , mihombo noho ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fototra toy ny herinaratra sy famatsian-drano any amin'ireo tanàna tsizarizary ipetrahan'ireo ” mahantra sy sahirana ” ao amin'io firenena io.
Nilaza i Zikode fa “ny trano bongo tsy misy rano, herinaratra ary fanadiovana dia tsy mendrika ny ho antsoina hoe trano,” hoy ny fanambarana an-gazety avy amin'ny Living History Forum. “Mifanohitra amin'izany, midika tontolo mampididoza ny fiainana izay henjana manokana ho an'ireo vehivavy, ankizy ary vondron'olona vitsy an'isa,” hoy i Zikode.
Ny olan'ny trano fonenana sy ny tsy fahampian'ny fidiovana dia nanamafy ny areti-mandringana COVID-19 teny anivon'ireo vondrom-piarahamonina sahirana sy marefo ao Afrika Atsimo.
Ny asa tsy iraviraviana tànana ataon'i Zikode no nahazoany dera avy amin'ny vahoaka, saingy ilay hetsika dia heverina ihany koa ho loza mitatao ho an'ny mpitondra fanjakana any Afrika Atsimo.
Mifampizara habaka iraisany amin'ireo mpandresy teo aloha i Zikode, anisan'izany tato anatin'ireo taona faramparany: Elena Urlaeva (2010), Narges Mohammadi (2011), Sapiyat Magamedova (2012), Justine Ijeomah (2013), Rita Mahato (2014), Islena Rey Rodríguez (2015 ), Abdullah al-Khateeb (2016), Gégé Katana Bukuru (2017), Teodora del Carmen Vásquez (2018), Najwa Alimi (2019) ary Intisar Al-Amyal (2020).
Miady ho an'ny fahamendrehan'ireo mpipetraka anaty trano bongo
Ny fanavakavahana an-tanàndehibe mifototra amin'ny foko niaviana no iray amin'ireo endrika mamaritra ny “apartheid” tao Africa Atsimo. Na izany aza, nitohy ao amin'io firenena io ny fitsipiky ny habaka an-tanandehibe taorian'ny fianjeran'ny apartheid , na dia amin'ny endrika hafa aza, .
Ny Afrikàna tatsimo dia mbola mizarazara hatrany ho ireo manana trano sy ireo tsy manan-kialofana, mponina anaty trano bongo.
Na izany aza, ny “ampahany tamin'ny hetsi-panoherana nalaza tao an-toerana nanoherana ny fitondram-panjakana” nanenika an'i Afrika Atsimo tamin'ny 2001 dia nitarika ny fipoiran'ny Abahlali baseMjondolo (AbM), “hetsika mahaleotenan'ireo mponina an-trano bongo,” araka ny lazain'i Richard Pithouse, mpikaroka amin'ny politika sy ny iraisam-pirenena ao amin'ny Oniversite ao Rhodes, Afrika Atsimo. Ny AbM dia “teraka avy tamin'io hetsika ifotony io ary nanomboka teo dia namoaka fitakiana ny tsy maitsy hananana fizakantena ara-pitantanana, ny drafitra an-tanàndehibe eny ifotony ary ny zo hanana tanàna,” hoy i Pithouse.
Tamin'ny Mey 2005, olona maherin'ny 5.000, mponina avy amina tanàna tsizarizary sy tranoben'ny kaominina tao Durban no nikarakara hetsi-panoherana nitakiana ny zo ho afaka miditra amin'ny fananantany, trano fonenana sahaza, trano fidiovana ary fampitsaharana ny fanesorana an-keriny.
Nigel C. Gibson, anglisy mpikatroka mafàna fo sy manam-pahaizana dia nanambara fa ireo mpanao fihetsiketsehana dia “nanolotra fehezan-dalàna miaty fitakiana 10 izay novolavolain'izy niarahana tamin'ny fiarahamonina.” Izany no nitarika ny AbM, tamin'ny fiandohan'ny taona 2006, “hikarakara ankivy ny fifidianana ifotony tao an-toerana izay nokasaina hatao ny volana Martsa tamin'io taona io,” hoy i Gibson.
Saingy tsy ny rehetra no nakasitraka sy tsara fandray ny ady nataon'i AbM ho an'ireo marefo.
Tamin'ny Septambra 2009, ny foibe niaingan'ny hetsika AbM tany amin'ny Arabe Kennedy tao Durban dia notafihana lehilahy mitam-piadiana, teo ambany mason'ny polisy. Nikaroka an'i Zikode ireo mpanafika , izay norahonany hovonoina.
Ireo fanafihana izay voalaza fa nataon'ireo “olona nifandray tendro tamin'ny sampan'ny ANC teo an-toerana ” (Kongresy Nasionaly Afrikanina, ny antokon'ny fitondrana tany Afrika Atsimo), dia nahafaty olona roa, nandratra maro ary naharava trano bongo 30.
Taorian'izany dia niafina i S'bu Zikode , ary mpikambana 13 AbM no nosamborin'ny polisy.
Ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona, ​​Amnesty International dia namariparitra ilay fanafihana ho toy ny “herisetra natosiky ny fijery politika.”
Na izany aza, ny herisetra atao amin'ny AbM dia tsy nampihemotra ireo mpitarika azy na ny hetsika. Fa kosa, nanamafy ny fahavononan'izy ireo hanohy hiady ho an'ny zon'ireo Afrikàna Tatsimo marefo mponina an-trano bongo mba hanana fiainana mendri-kaja .